Hanitry ny fiainana (2 Kôr.2:16)
Lesona 13: Ny fiarahamonin'ny mpanompo
Catégorie : Lesona 13: Ny fiarahamonin'ny mpanompo
Hitantsika ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly ny amin'ireo Kristianina voalohany izay nanangana fiarahamonina vaovao sa my hafa amin'izay misy rehetra teto an-tany. Nikarakara ireo mambra sahirana tao amin'ny fiangonana izany fiarahamonin'ny Kristianina izany. Nanatratra ireo tany ivelany koa izy ireo ka nanampy azy sy nanasa azy ho isan'ny fiangonana.
Mampiasa sary an'ohatra marobe i Paoly hanehoana amintsika ny nanatsaran'ireo mpino tao amin'ny TV ny fiarahamonina nisy azy. Ambaran'i Paoly fa izy ireo no "fanatitra velona, masina" - Rôm. 12:1, izay atolotra ho an'Andriamanitra. Ambarany koa fa ny vahoakan'Andriamanitra no tenan'i Jesôsy (1 Kôr. 12:12-20), mpitondra hafatra koa (Mr. 5:18-20), ary tahaka ny hanitra (2 Kôr. 2:14-16). Ireo sary rehetra ireo no maneho amintsika fa ohatra maneho ny fanjakan'Andriamanitra ny Kristianina.
Eritrereto ny sary an'ohatra nampiasain'i Paoly anehoana ny Kristianina. Iza amin'izany no tianao indrindra? Nahoana? Inona no sary an'ohatra maneho indrindra an'Andriamanitra izay tianao haseho amin'ny fiarahamonina misy anao?
Ny tsirairay avy amin'ireo sary an'ohatra ireo dia mifandray amina asa iray, tsy hoe mba haneken'Andriamanitra antsika, fa amin'ny maha-olona efa neken'Andriamanitra antsika noho ny amin'ny sorona nataon'i Kristy, izay mamaly ny fitiavana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ka mijoro ho mpiasany eo amin'ny tontolo maratra sy efa ho faty.
Maneho amintsika ny endriky ny fanjakan'Andriamanitra ny sary an'ohatra nataon'i Paoly: fitiavana sy fahasoavana. Inona no mitranga rehefa maneho ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny hafa isika? Asehontsika fa anisany ary mandray anjara amin'izany fanjakana mandrakizay izany isika. Ny ohatra asehontsika dia hanampy ny hafa hahita fa handringana ny faharatsiana Andriamanitra amin'ny farany. Azontsika atao ny miaina ny fahamarinan'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana misy antsika, amin'ny maha-mpitondra hafatr'i Jesôsy antsika. Azontsika atao ny maneho ny fahamarinany amin'ny olona izay anaovantsika asa fanompoana eo amin'ny fiainana.
Vakio ny 2 Kor. 2:16. Inona no maha-samy hafa ireo hanitra roa ao andininy io? Ahoana no ahafantarantsika izay misy antsika amin'ireo?